နှစ်ထပ်စောင်းနှင့်အတူနေအိမ် Prefab T ကအိမ်သူအိမ်သား
အရိုးစုအတွက်ပေါ့ပါးသောသံမဏိကိုယ်ထည်အဆောက်အ ဦး များနှင့်အရောင်အသွေးစုံလင်သောသံမဏိအသားညှပ်ပေါင်မုန့်အိမ်များကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်အရောင်သုံးသံမဏိပြားများ, သော့ခတ်ဆက်သွယ်မှုအားဖြင့်စံကိန်းပကတိတန်ဖိုးအစိတ်အပိုင်းအရသိရသည်ထုတ်ကုန်များ၏ Spatial configuration ကို, စုဝေးနှင့် disassemble ရန်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်, ယာယီအဆောက်အအုံများကိုစံသတ်မှတ်ထားသောအထွေထွေစီးပွားရေးအကျိုးရှိသည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးအယူအဆကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အိမ်များကို ဦး ဆောင်။ စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုကိုဖြည့်စွက်ပြီးပုံစံအပြည့်အစုံ အသုံးပြု၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်ကိုအပြီးသတ်တည်ဆောက်ရန်။.
ထုတ်ကုန် Prefab အိမ်
မူလနေရာ ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Box ကို Modular အိမ်
ပစ္စည်း EPS သားညှပ်ပေါင်မု panel ကို
အရွယ်အစား 3မဂ္ဂါဝပ် * 6mL * 3mH
Window PVC ပြတင်းပေါက်
အပြင်အဆင် PVC အပြင်ဘက်နံရံဘုတ်နှင့် Asphalt tile
သက်တမ်း 20 နှစ်ပေါင်း
Foshan The Box Modular House Co. , Ltd သည်ထုတ်လုပ်မှုတွင်အထူးပြုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်,ရောင်းရန်ရှိသည်,စက်မှုနှင့်လက်စွဲစာအုပ်သားညှပ်ပေါင်မု panels.In ထို့အပြင်၏အပြောင်းအလဲနဲ့,ဒါ့အပြင်ဒီဇိုင်းကနေအထိတစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်,ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အိမ်နှင့်ကွန်တိန်နာအိမ်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း 20000 m2, ကုမ္ပဏီတွင်အရောင်သံမဏိသားညှပ်ပေါင်မုပြားများထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများစွာရှိသည်,အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောထောက်ပံ့အဆောက်အ.
ကုမ္ပဏီသည်အရည်အသွေးနှင့်အောင်မြင်မှုရရန်စျေးကွက်ကို ဦး စားပေးသောဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒကိုစွဲကိုင်ထားသည်,စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူနည်းပညာနှင့်တိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်အတူထိရောက်မှု.
အိမ်၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်သည်. ယေဘူယျအားဖြင့်, ဆောက်လုပ်ရေးကာလသည် ၆-၈ ယောက်ရှိဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့မှစတုရန်းမီတာ ၂၀၀ ရှိသောအိမ်၏ ၁ လဖြစ်သည်. သံမဏိကိုယ်ထည်ကိုတည်ဆောက်ရန်တစ်ပတ်သာကုန်ကျသည်.
အိမ် install လုပ်နည်း
လိုအပ်ပါကသင့်အားကူညီရန်ပညာရှင်များကိုစေလွှတ်လိမ့်မည်. ဒါပေမယ့်ဗီဇာကြေး, လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ, နေရာထိုင်ခင်း, လုပ်ခကို EXW စျေးနှုန်းထဲမှာမထည့်ရ.
အမှတ်အသားများ (Tags)：ခေတ်သစ် Modular နေအိမ်